Anyi na-acha red: foto na nkọwa, na-eto ma na-elekọta n'ụlọ - N'ime ụlọ osisi - 2019
Uhie Anthurium acha uhie uhie bụ osisi pụrụ iche na nke mara mma nke meriri ọnọdụ ndị na-eto eto na-eto eto nwere ọdịdị pụrụ iche na agbacha nke okooko osisi. Ọ gaghị esiri ike na-eto eto na ụlọ, ya mere ọbụna novice florists nwere ike mfe nwere ifuru n'ime ụlọ greenhouses. Ihe osisi a yiri na ihe ị kwesịrị ịmara banyere nuances nke ilekọta ya - gụọ banyere ya n'okpuru.
Ọnọdụ maka na-eto eto n'ụlọ
Ikuku okpomọkụ na iru mmiri
Nkọwa botanical nke osisi ahụ
Anthurium-acha uhie uhie - osisi nke sitere na Aroids, nke a na-akpọ Anthurium. N'ihi oge ntoju uhie na-acha ọbara ọbara, a na-eji ọmarịcha arụmọrụ nke ọma ma ghọọ ezigbo mma nke ụlọ ọ bụla. Akwụkwọ mpempe akwụkwọ ya bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ụdị obi ma ọ bụ akụ, ma dị na mkpa, ma n'otu oge ahụ, ike. Ụdị ụdị a na-eru ma ọ dịkarịa ala 75 cm n'ịdị elu, ọ bụ ezie na ọtụtụ ụdị na-eto na 80 cm, na obosara ya ruo ọkara mita.
N'oge okooko osisi na peduncles, a na-etolite ihe dị ka okpiri: ọ bụ akụkụ kacha mma nke osisi ahụ. Ụcha nke agba ndị na-abanye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọbara ọbara, mgbe mgbe ọ na-acha uhie uhie. N'okpuru ọnọdụ ọma na-eto eto, enwere ike inwe nkwụsịtụ na okooko, ma ọ bụrụ na n'oge oge oyi, okooko osisi ahụ ga-apụ kpamkpam site na osisi ahụ ruo ọnwa 1-2.
O doro anya na anthurium na-amịpụta mkpụrụ osisi fatịlaịza ọ bụla site na mkpụrụ akwụkwọ ọ bụla, ha niile na-adịru ihe dị ka izu isii. Ọdịdị nke peduncles na-aga n'ihu na-eme ka o doo anya ogologo oge okooko osisi na ichebe akwa ornamental ogologo oge.
Ọ dị mkpa! A na-eji osisi ahụ emepụta ụmụ, nke, dị ka isi ohia, nwere ike ịmepụta okooko osisi na okooko osisi. Na ụdị nke nne ha na-abụkarị ndị ọzọ, na ụmụaka a obere obere.
Agbanwere ike na-acha uhie uhie, dị ka ụdị ọ bụla ọzọ nke osisi a, nke mere, mgbe ọ na-etolite n'ụlọ, nke mbụ ọ dị mkpa iji mepụta ọnọdụ kwesịrị ekwesị maka uto na mmepe nke ifuru.
Ebe ọ bụ na anthurium sitere na ebe ndịda, ọ na-ahọrọ ìhè anyanwụ na-ekpuchi, ma n'otu oge ahụ, ọ ga-ezu maka photosynthesis na-arụ ọrụ n'ime epupụta. Mpempe akwụkwọ windo na windo ndịda maka ịdakwasị ite ahụ agaghị arụ ọrụ, dịka na ikpughe mgbe niile ka ọ bụrụ ìhè anyanwụ, okooko osisi na akwụkwọ ntanetị nwere ike ire ọkụ, akwụkwọ a na-ede akwụkwọ ga-amalitekwa ịgbanwuo odo odo, gbadaa.
N'otu oge ahụ, osisi a na-etinye n'ime etiti nke ime ụlọ ma ọ bụ na corridor dị ala na-agaghị ahapụ ifuru okooko osisi na okooko osisi, ya mere ebe kachasị mma maka anthurium ga-abụ ìhè nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke ụlọ, ma ọ bụrụ na anwụghị anwụ na-acha ogologo oge. N'ụbọchị ígwé ojii, iji ihe ọkụkụ na-emepụta ihe, nke ọrụ ya dị mma fitolampy.
Leba anya n'ụdị anthurium dị ka Scherzer na Andre.
N'iburu n'uche ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, a ghaghị ịchekwa okpomọkụ na-adịgide adịgide n'ime ụlọ ya dị elu na + 20 ... + 25 ° C n'oge ọkọchị ma ọ bụghị ala karịa + 18 Celsius C n'oge oyi. Ibelata ụkpụrụ ndị a na-eduga n'ọnwụ nke osisi ahụ.
Maka ogo kwesịrị ekwesị n'ime ime ụlọ ahụ, ọ nwere ike ịchọta ihe nrịba ama nke 40-50%, ma na nke a, n'oge okpomọkụ, ị ga-arụ ọrụ mgbe niile, ọ dịkarịa ala otu ugboro n'ụbọchị. Iji mee ka osisi ahụ nwee ntụpọ kwesịrị ekwesị, ịnwere ike itinye ite ahụ n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ, karịsịa ma ọ bụrụ nha ya na ọkwa ọkụ ya na-enye ya ohere. Na oge okpomọkụ, ọ bara uru iji ifuru n'okporo ámá, ma ọ bụ naanị na ebe nchekwa, na-echebe ya site na ìhè anyanwụ kpọmkwem.
Ị ma? A na-ewere ụdị ụdị anthurium dịka otu nwoke dị iche iche nke osisi, nwere ike ịbawanye ike nke ndị nnọchianya nke inwe mmekọahụ siri ike na ime ka ọnọdụ ikuku zuru oke dị n'ụlọ, na-enye obi ụtọ ezinụlọ na ọdịmma.
Mgbe ị na-elekọta ụlọ, ị kwesịrị ị na-akwụ ụgwọ pụrụ iche mgbe nile maka ụdị ịgbara mmiri, ịkọ mmiri, ịkwagharị na ọbụna kwachaa, usoro nke nwere ọtụtụ atụmatụ. Nke a na-emetụtakwa ịmepụta anthurium ọbara ọbara, bụ nke na-agaghị enwe ike ime ka ị nwee mmasị na okooko osisi na-adịghị mma ma ọ bụrụ na ị gaghị eso ihe ndị a chọrọ.
Ala n'ime ite osisi kwesịrị ịdịtụ ntakịrị mmiri mmiri, ma ọ bụrụ na mmiri adịghị edozi. Ná nkezi, a na-agba ifuru ahụ ugboro abụọ n'izu, na-ebelata oge a nanị n'oge oyi dormancy. Mmiri mmiri mmiri ga-abụrịrị nkewa (ọ dịkarịa ala ụbọchị 5) ma kpochaa ya, karịsịa ma a bịa n'igbu ngwongwo.
A na-ewerekwa mmiri mmiri dị ka acidified dị mma maka ogbugba mmiri - 2-3 tụlee nke ihe ọṅụṅụ lemon na-etisasị ke 1 liter mmiri. Ịgbara ihe dị otú ahụ n'oge ọ bụla na-eme ka ọhụụ dị mma na mmepe nke anthurium.
N'ozuzu, anthurium na-emeghachi omume n'ụzọ dị mma, mana n'otu oge ahụ ọ naghị amasị ọtụtụ nri na ala. Iji ghara ịghara ihie ụzọ na ịghara ikwe ka nkwụsịtụ, ọ dị mkpa ịzụta ifuru nanị na oge opupu ihe ubi na oge okpomọkụ na iji otu oge na ọnwa 1-1.5.
Site na oriri na-edozi ahụ na-eme ka nri fatịlaịza zuru ụwa ọnụ maka okooko osisi n'ime ụlọ ma ọ bụ ogige ogige - Otú ọ dị, a ghaghị belata ntinye uche ha dị ka okpukpu 2-3 karịa uru ndị na-emepụta. Nnukwu ihe igwe na igwe macro na-emebi ihe na-eme ka ohia karịa oge ha, n'ihi ya, ọ bụrụ na i kwenyere na ọ dị mkpa ịme ihe ahụ a họọrọ, mgbe ahụ, ọ ka mma ichere ntakịrị na mgbakwasa elu.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ọrịa anthurium na-arịa ọrịa ma ọ bụ pests nwere ya, mgbe ahụ, ọ ka mma ịkwụsị nri ọzọ. Ọ dị mkpa iji kwụsị oge iwebata ihe oriri n'ime ikpe mgbe ọ na-eto eto, akwụkwọ ndị na-enweghị isi na usoro mgbọrọgwụ na-adịghị ike - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ọ bụla nwere ike igbụ mgbọrọgwụ nro.
Achọghị ịkpụ anthurium kwachaa, ma a ghaghị iwepụ osisi ahụ okooko osisi okooko osisi mgbe ọ bụla okooko. Debe usoro a nke ọma ma jiri mma magburu onwe ya nke na-ahapụghị ihe ọkpụkpụ na ihe ndị a na-egbutu: ha ga-adaba na isi ala nke mkpuru osisi ahụ, na iji zere imegharị ala, ọ ka mma ịfụba carbon.
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ichere ruo mgbe mkpuchi nke inflorescence na-akpọnwụ, ma mgbe nke ahụ wepụ ya - na oge oge isi na-atachasị kpamkpam ma dị mfe nkewa si na ifuru. Akpọrọ akwụkwọ ma ọ bụ gbanwee epupụta na-edozi mwepụ, a pụkwara bipụ akụkụ ndị a mịrị amị nke akwukwo ahihia dị mma.
N'ime afọ abụọ mbụ nke ndụ osisi ahụ, a gaghị emegharị ya, ebe ọ bụ na ifuru nwere ohere zuru ezu n'ime ite ahụ. Site n'afọ nke atọ ruo n'afọ nke ise nke ịgha mkpụrụ, osisi ahụ ga-agbanwe ebe ọ na-eto kwa afọ, mgbe ọ bụla kwa afọ 2-3. Ọzọkwa, oge ọ bụla, drainage oyi akwa kwesịrị ịba ụba, na osisi - iji banye n'ime ala.
Okpokoro a na-esi ísì ụtọ kwesịrị ekwesị, ma ọ bụ naanị 2-3 cm karia nke gara aga. Ihe eji eji ngwaahịa dị otú ahụ enweghi ọdịiche dị mkpa, mana iji zere inwe nsogbu mmiri na mgbọrọgwụ, ọ bụ ihe amamihe dị na nhọrọ ịhọrọ sereiki ma ọ bụ plastic plasters, ma mgbe niile na drainage oghere.
Ala nke Anthurium kwesiri ighota ma di nma. N'ikpeazụ, ọ nwere ike ịchekwa ala maka bromeliads, orchids ma ọ bụ ọbụna cacti, ma ya na ọdịnaya dị mkpa nke peat, nke na-eme ka mkpụrụ ahụ dịkwuo okpukpu. Ọ bụrụ na enweghị ala a zụrụ, ị nwere ike ịkwado onwe gị n'onwe gị site na ịgwakọta peat, ájá na humus, tinyere mgbakwunye nke obere paini ma ọ bụ nsị spruce.
Ọ dị mkpa! Iji mee ka elu ikuku na-ekpo ọkụ nke ọma, ị nwere ike ịgbakwunye ụgbụ ọkụ, ụfụfụ ma ọ bụ obere pebbles na mkpụrụ osisi a kwadebere.
Usoro nhazi a dabere na ọtụtụ ụkpụrụ omume:
Na-ejuputa tank mmiri ọhụrụ nke nwere drainage drainage na ala a kwadebere (ihe dị ka 1/3 nke ọnụ ọgụgụ zuru ezu).
Wepu osisi site na ite ochie ma tinye ya n'ime ihe ọhụrụ kụrụ akpa.
Na-ejuputa ebe fọdụrụ na ngwakọta ala, na-enweghị akara na mkpokọta, ma na-agbanye obere mmiri.
Iji jikwa mmiri zuru ezu, ị nwere ike kpuchie elu na sphagnum akpa.
Maka ụbọchị 3-4 sochirinụ, a ka nwere ike ịhapụ ụlọ ahụ n'oge ochie, mana n'ọdịnihu, ọ ka mma ịkwaga ya na windo nke ìhè dị n'ebe ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ n'ebe ọdịda anyanwụ.
Mmeputa nke osisi ime ụlọ bụ otu n'ime ọrụ ndị dị mkpa maka onye ọ bụla na-elekọta ubi, n'ihi na ọ bụghị naanị na ị nwere ike ịnweta okooko osisi kachasị amasị gị, ma ị nwekwara ike ịchekwa ụfọdụ ụdị ahụ site na ịnwụ n'ihi ụda nke akụkụ rhizome.
Mgbe ị na-eto eto anthurium, e nwere ọtụtụ ụzọ isi rụọ usoro dị otú a: nkewa nke ohia, grafting (epupụta Ome), na ịgha mkpụrụ na-adabarakwa adaba.
Usoro a bụ naanị maka ndị florists nwere ahụmahụ, n'ihi na ọ na-achọ nkenke dị elu nke ihe niile a rụrụ. A na-eji mgbatị dị iche iche na-agbanye mgbọrọgwụ, n'ihi ya enwere ike imebi emebi. A na - ekewapụta ihe ndị ahụ na - eji nwayọọ nwayọọ eme ihe, nke mere na nke ọ bụla n'ime ha ga - enwe akụkụ ọ bụla ga - enwe ma ọ dịkarịa ala otu ihe na - eto eto na 3-4: nke a bụ naanị ụzọ iji kwenye na osisi ahụ dị ọhụrụ na ebe ọhụrụ.
Iji nweta ihe ọkụkụ, ị ghaghị ime ihe ndị a:
Họrọ otu osisi toro eto na-acha uhie uhie nke anthurium nke nwere nnukwu ọnụ ọgụgụ ụmụ.
Kwadebe tankụ dị iche iche nke jupụtara na windo drainage abụọ ma ọ bụ atọ na obere ngwakọta ala.
Jiri nlezianya wepụ ifuru si ite nke mbụ ma kewapụ oge ịse si n'aka nne osisi na obere akụkụ nke usoro mgbọrọgwụ.
Doo okpokoro ohia n'osisi ihe ndi di iche iche ma juputa ya na ala ozo, nke di ka onu ogu.
Ị ma? Ọtụtụ osisi dị n'ime ụlọ nwere ike pụrụ iche iji nweta ike na-adịghị mma n'ụlọ. Dịka ọmụmaatụ, Tradescantia ga-echebe ndị bi na anyaụfụ, na geranium ga-azọpụta site na anya ọjọọ.
Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na mmeputakwa anthurium site na nkerisi ohia na - enye gị ohere inweta ihe atụ ọhụrụ oge ntoju ugbua na mbụ - afọ abụọ nke ịgha mkpụrụ.
Akuku nke osisi ime ụlọ bụ otu n'ime ụzọ ndị kasị ewu ewu na ọnụ ọnụ nke mmeputakwa ha, ebe ọ bụ na apical cuttings na-agbanye mgbọrọgwụ na ngwa ngwa na ebe ọhụrụ.
Isi ihe bụ ịgbaso usoro iwu ụfọdụ, ndị isi bụ ndị a:
Ị nwere ike iwepụta ihe ubi naanị site na osisi ndị na-adịghị ike site na ọrịa ma ọ bụ pests.
E kwesiri ibu uzo na-eto eto na nke obula a choputara nke igba ogba.
Ogologo oge nke oke a bụ ihe karịrị 2-3 internodes.
Mgbe egbutu, a ghaghị ịmịchaa nke ọ bụla ruo minit 10-15 ma ọ bụ nanị mgbe e mesịrị ka a kụọ ya n'ala - oge a ga-ezuru iji gbochie germination nke ome.
Usoro nke anthurium grafting na-agụnye ọtụtụ ihe dị mkpa:
Nkewa nke eji egbutu osisi na - eto eto - a na - eji mma egbu egbu na - egbute ya.
Mbido nke mmiri n'ime mmiri (nke a kpụrụ ọkụ) ma ọ bụ ngwakọta ala ruo mgbe mgbọrọgwụ mbụ pụta na ya. Na ala nke tank na mmiri, ị nwere ike ịwụnye mbadamba nkume carbon ọrụ, ọ dịkwa mma iji dozie mkpụrụ osisi kwesịrị ekwesị site na ọnụ ọnụ nke peat, ájá na perlite. A ghaghị ịgha mkpụrụ nke ihe dị iche iche maka mgbọrọgwụ ruo omimi nke 5 cm, na maka mmegharị ngwa ngwa, ị nwere ike ikpuchi cuttings nke nwere ike ịgbanwe ma ọ bụ mepụta obere griin ga-eji akpa rọba. The nkezi okwu dịrị - 2-3 izu.
Mkpụrụ osisi na-agbanye mgbọrọgwụ n'osisi na-adịgide adịgide na nhazi nke nlekọta ọzọ. A na-eme usoro ndị a n'otu ụzọ ahụ dị ka nke a na-ejikarị emegharị, na-eji otu ala ahụ.
Ka osisi ahụ wee gbanye mgbọrọgwụ na ebe ọhụrụ ma malite okooko, ọ ga-ewe ma ọ dịkarịa ala afọ abụọ.
Ntughari nke anthurium site na akwukwo akwukwo di iche iche yiri usoro nke mkpuru osisi site na Ome, ya na nani ihe di iche bu na karia ngalaba ndi a akowara n'elu, akwukwo ohia di nma (tinyere petiole). Tupu etinye ya na mkpụrụ osisi a kwadebere, ha ga-eji nlezianya gbanwee n'ime tube ma dochie ya n'ọnọdụ a na ụlọ ọrụ gọọmentị.
Gụọ kwa ihe mere anthurium anaghị agba oge na ihe ọ ga-eme.
A na-emegharị ihe n'ime ala na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkpirikpi nke mpempe akwụkwọ ahụ, naanị 1/3 nke okpokoro ahụ gbagọrọ agbagọ kwesịrị ịnọgide n'elu. Otú ọ dị, ọganihu nke nhazi ọ bụla na-adabere na nkwụsị nke njedebe na ihe bara uru nke ngwakọta ala: n'ọnọdụ a, ọ ka mma ịzụta ala dị njikere maka na-eto violets.
Iji mee ngwa ngwa nke akwukwo ahihia ga enyere aka okpu plastic ma ọ bụ ihe nkiri plastik nke ga-enye aka mee ka mmetụta nke griin ha di na ya. Ọ bụrụ na a na-ahụ ọnọdụ niile na-eto eto, ome nke mbụ ga-apụta site na etiti tube banyere otu ọnwa mgbe ọ kụrụ n'ala. Enwere ike igbanwe osisi na-eto eto na ebe ebighi ebi nke uto tupu tupu ọnwa 2-3.
Ụzọ kachasị mfe iji nweta ihe ọkụkụ akụrụngwa dị mma bụ ịzụta ya site na ụlọ ahịa pụrụ iche ma ọ bụ site n'aka ndị nakọtara nke ọma, ma ị kwesịrị ịlele ụbọchị ya (mkpụrụ anthurium na-eto n'ime 3-4 ọnwa mgbe nchịkọta).
N'ụlọ, a na-enweta mkpụrụ osisi na-amị mkpụrụ site na nsị okooko osisi: n'oge oge okooko osisi, ọ dị mkpa ịnakọta pollen (nku nro) site na ntị nke okooko osisi mbụ, ma tinye ya na mpempe akwụkwọ, tinye ya na nchekwa na friji, ebe a ga-edebe billet ahụ ruo mgbe ọ ga-apụta na osisi ahụ abụọ ifuru. Ọzọ, a ghaghị imetọ ifuru nke abụọ na pollen agwakọtara.
Iji hụ na ihe ịga nke ọma nke usoro ahụ, ọ bara uru ikwughachi ya 4-5 ụbọchị n'usoro. Mkpụrụ osisi na tomato na-egbuke egbuke na-apụta na osisi ahụ tupu tupu ọnwa 8-12. Na nke ọ bụla n'ime ha, a na-ezochi mkpụrụ osisi 1-4, nke, mgbe ha wepụsịrị, ga-asacha ya nke ọma na mmiri ma tinye ya maka awa 2 na ngwọta na-adịghị ike nke potassium permanganate, nke ga-egbochi ịmepụta ihe.
Usoro nke ịgha mkpụrụ dị iche iche anaghị ewe oge - maka nke a ị kwesịrị:
Kwadebe igbe maka seedlings ma jupụta mkpụrụ osisi kwesịrị ekwesị (nwere ike ịbụ ngwakọta nke peat na ájá).
Ghaa osisi na omimi nke 0,5 cm ma ọ bụ naanị gbasaa ha n'elu ala, ọ bụ naanị ntakịrị ihe a ga-efesa.
Rị mkpụrụ ahụ na karama ma na-ekpuchi osisi ndị ahụ na fim ma ọ bụ iko, na-achọ ịmepụta mkpụrụ ndụ griin.
Tupu ntuputa nke Ome, ọ dị mkpa ikuku ala kwa ụbọchị ma, dị ka ọ dị mkpa, hichaa ya na obere karama, na-enwe okpomọkụ n'ime ụlọ ahụ dị + 25 Celsius. Ọtụtụ mgbe, mkpụrụ osisi nke anthurium a kụrụ na-ewe ihe karịrị ọnwa 1-2, a pụkwara ịhụ okooko osisi ọhụrụ mgbe nanị afọ 4 gasịrị.
N'ime ọrịa maka anthurium, ọrịa ndị ọrịa fungal dị ize ndụ, karịsịa, anthracnose, nke na-egosipụta onwe ya na-eme ka akụkụ nke akwukwo ahihia na-eme ka ọ ghara ịdị na-egbu ya. Dị ka pests, nsogbu ndị a nwere ike imetụta ọkpụkpụ anthurium, ya mere hụ na ala na-adị mma mgbe nile (n'ebughị nnukwu mmiri mmiri), ọ dịghị akwụkwọ ntinye n'ime ụlọ ahụ, osisi ahụ na-enwekwa ìhè anyanwụ.
Na ọgụ megide anthracnose na ọrịa ndị ọzọ na-acha ọbara ọbara anthurium, ọgwụ ndị dị ka Previcur, Skor, Ordan, Fundazol nwere ike iji na dosages gosiri na ngwugwu. N'ime ụmụ ahụhụ ndị na-ata ahụhụ na okooko osisi na-agụnye akwụkwọ aphids, scutes, spider mites na thrips, nke na-arụsi ọrụ ike na sap nke osisi ahụ ma mee ka ọ nwụọ.
Site na ngbanwe dị ntakịrị na steeti anthurium, nyochaa ifuru ọma, na-elekwasị anya n'ime akwukwo akwukwo, ebe ọ bụ na e nwere ndị na-ahụkarị pests. Rụkwa anya n'ihe ndị na-arị elu nke akwukwo akwukwo, ma ọ bụrụ na ha nwere ụyọkọ osisi, mgbe ahụ, osisi ahụ na-ata ahụhụ site na ọnyà ududo.
N'ime ihe ndi ogwu di iche iche nke ogwugwu maka umu ogwu, ndi na-esote ihe ndi ozo nwere ike iche:
Ознакомьтесь подробнее с основными болезнями и вредителями антуриума.
N'ịmara otú e si elekọta osisi mara mma na nke osisi, ihe ize ndụ nke ịmepụta nsogbu ọ bụla a kọwara nwere ike belata, ọ bụrụ na ihe ịrịba ama nke ọrịa ma ọ bụ ọnụnọ nke pests na-eme, mgbe ahụ, ọ ga-adị mfe karị ịnagide ha. Leba anya na ifuru gị, na anthurium na-acha uhie uhie ga-enwe obi ụtọ gị mgbe niile site na ya.
Mkpụrụ vaịn "Bazhena"
Obere anụ ọkụkụ: nkọwa nchịkọta, idebe na ịzụlite
Ọ ga-ekwe omume maka rabbits bran: gịnị bụ iji, esi nye ha
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Anyi na-acha uhie uhie: na-eto eto n'ulo